ganacsiga ugu weyn ee Haitian Drive
Ningbo Hilectro Power Technology Co., Ltd waa ganacsiga ugu weyn ee Haitian Drive, kaas oo ku takhasusay soo saarta forklift korontada, stacker, gaari muuqaalka, golfcart shirkadda usiineysa waxaa u hoggaansanaayeen falsafadda ah Haitian Group "Tayada Sare, oolnimada sare iyo tamarta badbaadiyo ", iyo waxs bixiya waxyaabaha fasalka ugu fiican si ay macaamiisha ku.
madal baaluq soo koraya ee Group Haitian
Hallaysay madal baaluq soo koraya ka mid ah Haitian Group, Hilectro Power Technology ayaa kooxda is-horumariyo controller.professional motor saarka, bir sheet lagre iyo rinjiyeynta workshop.At waqti isku mid ah, shirkadda fuliya ISO ah: 9001 tayada hababka maaraynta strictiy, pursuiting horumarinta tayada joogto ah.
Shirkadda waxa uu ku yaalaa Zone Warshadaha ee Beilun taas oo ah mid ka mid ah dekedaha ugu weyn adduunka oo dhan. Meesha of warshad waxay daboolaysaa 110 thous square meters.Equipped la khadadka wax soo saarka badan kuwaas oo sanadle ah awoodda waa in ka badan 10 nooc oo thous forklift, shirkadda ayaa xarunta imtixaanka sare waqti isku mid ah.
R tayo sare leh & D kooxda
Ururinta la kormeerayaasha xirfadeed, shirkadda uu leeyahay R & D kooxda dhamaadka sare. By isku waayo-aragnimo ah gudaha iyo dibada, kooxda waxaa hagaajinta tayada forklift si joogto ah, iyo in la tyring kaalinta ee qeybiyeyaasha top in industry ee.